Ruhr University Bochum - Higher Education ná Mba Ọzọ na Europe
Ruhr University Bochum Nkọwa
acronym : -ete
tọrọ ntọala : 1962
Students (ihe ruru.) : 43000
Echefukwala atụle Ruhr University Bochum
Idebanye aha na Ruhr University Bochum
Ruhr University Bochum , emi odude ke n'ebe ndịda ugwu nta nke Central Ruhr ebe Bochum, e hiwere na 1962 dị ka ndị mbụ ọhụrụ ọha mahadum dị na Germany ebe ọ bụ na Agha Ụwa nke Abụọ. Ntụziaka malitere na 1965.
The Ruhr-University Bochum bụ otu n'ime ndị kasị ibu mahadum na Germany na akụkụ nke Deutsche Forschungsgemeinschaft, ndị kasị mkpa German research ego nzukọ.
The ete bụ nnọọ ihe ịga nke ọma na Ọkasị Initiative nke German Federal na State ọchịchị (2007), a asọmpi n'etiti Germany kasị mahadum. Ọ bụ otu n'ime ole na ole oru hapụrụ adọpụ aha nke ihe “J.Randall mahadum”, ma ha aga nke ọma na nke ikpeazụ gburugburu nke mpi. E nwere ugbu a itoolu mahadum na Germany na jide nke a aha.
The University of Bochum bụ otu n'ime ndị mbụ mahadum na Germany ịme mba Bachelor si na nna ya ukwu degrees, bụ nke nọchiri ndị omenala German Diplom na Magister. Ma e wezụga n'ihi a ole na ole pụrụ iche ikpe (-atụ na Iwu) ndị a degrees na-awa site nile ikike iche nke Ruhr University. Ugbu, mahadum awade a ngụkọta nke 184 dị iche iche ọmụmụ omume site nile agụmakwụkwọ ubi-anọchi anya na mahadum.
Emi odude ke ufọt ike, ele ọbịa mepere ebe nke Ruhr, na obi nke Europe, na Ruhr-Universität Bochum (-ete) ya 20 ikike iche, -Ete ịdọ aka ná ntị institutional nkeji, ebe ihe dị ka 5,600 ọrụ na-elekọta 41,000 ụmụ akwụkwọ si 130 mba. All oké na nkà mmụta sayensị ọzụzụ dị n'otu on otu kọmpat campus.
The ete bụ ya ụzọ ya aghọọ otu n'ime ndị na-eduga European mahadum nke 21st Century. Ihe na ọmụmụ na-awa dị ka Bachelor na Master ogo mmemme. Anyị mma mmemme ndị mere onwe ha na mba ofesi aha: -Ete Research School dị ka otu mba na mahadum maka ahaziri doctoral nnyocha ná ndụ sayensị, Mmadụ sayensị, engineering, na Humanities na-elekọta mmadụ na sayensị; na Ụyọkọ Ọkasị RESOLV (Ruhr explores Solvation); interfaculty na interdisciplinary Research Departments, nke na-agbarịta ibe, mba na mba networked, nkọ profaịlụ nke-ete. Tụkwasị na nke a bụ ihe ezigbo uru n'usoro ihe omume n'ihi na nkwalite nke Early Career Researchers, na ihe ndị magburu onwe akụrụngwa.
-Eme ka ọ niile bịa ndụ bụ ndị na-izute on campus na ha akpịrị ịkpọ nkụ maka ihe ọmụma, ọchịchọ ha nwere ịmata, na ntinye onwe ha. Ha na-enyere-enwe mmetụta na-ete na ha na-emeghe nke mkpebi na-eme ka ete ebe dị mma ndị mmadụ si gburugburu ụwa.
Faculty of Philosophy na Educational Research
Faculty of Civil na Environmental Engineering
Faculty of Ọdụdọ Engineering na Ozi Technology
Faculty of Physics na Astronomy
Faculty of Chemistry na n'ihi mmiri ọgwụ
Faculty of Biology na Biotechnology
Ị chọrọ atụle Ruhr University Bochum ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Ruhr University Bochum na Map
photos: Ruhr University Bochum ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Ruhr University Bochum.